अर्थतन्त्र Archives - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
२०७८ मंसिर १५ गते २१:३२
१५ मंसिर, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चपेटामा विभिन्न देशका सर्वसाधारण गर्छन् । मूल्यवृद्धिको कुनै भौगोलिकस सीमा देखिँदैन तर कतिपय सरकारहरूले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम लागू गर्छन् । भारतको नयाँदिल्ली प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ भ्याट घटाएको छ ।...
सुनको मूल्य आज घट्यो, यस्ताे छ आजकाे बजार भाउ !
२०७८ मंसिर १३ गते ११:१८
१३ मंसिर, काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९२ तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९२ हजार १००मा कारोबार भएको पहेँलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु १०० ले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी...
२०७८ मंसिर १० गते १०:५८
१० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ५१ पैसा कायम गरेको छ । युरोपियन यूरो एकको खरिद...
२०७८ मंसिर ७ गते १६:१३
७ मंसिर, काठमाडौं । साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) दोहोरो अंकले घटेको छ । मंगलबार नेप्से ३२ दशमलव २९ अंकले घटेर दुई हजार ७३३ दशमलब १२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । कारोबार रकम भने सामान्य मात्रामा बढेको छ...
२०७८ मंसिर ७ गते १२:०२
७ मंसिर, काठमाडौं । सुनको भाउ आज १६ सय रुपैयाँले घटेको छ । हिजो तोलामा ९३ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज १६ सय रुपैयाँले घटेर ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा...
यस्तो छ मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर !
२०७८ मंसिर ७ गते ११:२३
७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम ११८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम गरेको छ । युरोपियन यूरो एकको खरिद...
आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
२०७८ मंसिर ५ गते १९:४८
५ मंसिर, काठमाडौं । आइतबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । शुक्रबार तोलामा १ सय रुपैयाले घटेको सूनको मूल्य आज तोलामा ७ सय रुपैयाले घटेको हो । शुक्रबार तोलाको ९४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज पनि ह्वात्तै...
ग्यास उद्योगलाई कारबाही
२०७८ मंसिर ३ गते १२:४५
३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बाराको एक ग्यास उद्योगलाई कारबाही गरेको छ । श्री ग्यास वान नेपाल प्रालिलाई विभागले कारबाही गरेको हो । विभागले बजार अनुगमनका क्रममा नेपाल गुणस्तरबमोजिम नपाइएको भन्दै श्री ग्यास वान नेपाल प्रालिलाई कारबाही गरेको हो ।...
२०७८ मंसिर १ गते १४:०२
१ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको सुनचाँदी बजारमा बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले ओरालो लागेर ९४ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। मंगलबार सुन मूल्य प्रतितोला ९४ हजार ८सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार तेजाबी...
२०७८ कार्तिक २८ गते १२:४१
काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपालको सुनचाँदी बजारमा केही दिन अघिदेखि लगातार बढिरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज पनि प्रतितोला रु २०० ले उकालो लागेर रु ९४ हजार ६०० कायम भएको छ । पहेँलो धातु गत शुक्रबार प्रतितोला रु ९४ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो...
123 … 27 पछिल्ला »